"ဝ"တပ်ကို တရုတ်အစိုးရက တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တွေ ပေးပို့ကူညီ
စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောနဲ့ မေးမြန်းချက်
"ဝ"ပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSA ကို တရုတ်နိုင်ငံက တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တွေ ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ နာမည်ကျော် Jane’s Defence Weekly အပတ်စဉ်ထုတ် ကာကွယ်ရေး စာစောင်က ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ဖော်ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
TY-90 အမျိုးအစား ဝေဟင်က ဝေဟင်ပစ် ဒုံးကျည်လက်နက်တွေ တတ်ဆင်ထားတဲ့ Mi-17 အလတ်စား ရဟတ်ယာဉ် တွေကို ဖေဖော်ဝါရီ လကုန်ပိုင်း နဲ့ မတ်လဆန်းမှာ ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း မြန်မာအစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ သတင်းရပ်ကွက်တွေကို ကိုးကားပြီး Jane’s Defence Weekly စာစောင်က ရေးသားထားပါတယ်။
အဲဒီ Mi-17 ရဟတ်ယဉ်တွေကို ရုရှားနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ပြီး ကမ္ဘာအနှံ့ ရောင်းချရာမှာ များမကြာမှီကတင် တောင်တန်းဒေသတွေမှာပျံသန်းဖို့အတွက် အထူးမွမ်းမံထားတဲ့ အင်ဂျင်မျိုးအစားတွေထည့်သွင်း တပ်ဆင်ပြီး တရုပ်နဲ့ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံတွေကို ရောင်းချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ TY-90 အမျိုးအစားဒုံးကျည်တွေကတော့ တရုတ်နိုင်ငံထုတ်လက်နက် ဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ စစ်ရေးလေ့လာသူဦးအောင်ကျော်ဇောကတော့ တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေကို တခြားတိုင်းပြည်တွေကလည်း ဒီရဟတ်ယာဉ်တွေ ရောင်းချနိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
"တရုတ်ပြည်က လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဒီလောက်ကြီးတဲ့ လက်နက်တွေကို မြန်မာပြည်နဲ့ ဆက်ဆံရေး ဒီလိုအခြေအနေမှာရောင်းမယ်လို့ မထင်ဘူး။ပေးမယ်လို့ မထင်ဘူး။ဒါပေမယ့် တစ်ခြားနိုင်ငံကနေ ဝယ်ယူနိုင်တဲ့ အနေအထားတွေ အများကြီး ရှိနိုင်တယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုတို့မှာလည်း ရှိတော့ မရောင်းသည့်တိုင် မပြောနိုင်ဘူး။"
အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်တခုမှာ အဲဒီ ရုရှားနိုင်ငံလုပ် Mi-17 ရဟတ်ယဉ်တွေကို ဝယ်ယူတဲ့ အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာ တရုပ်နိုင်ငံအပြင် ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ လာအိုနိုင်ငံတွေလည်း ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Jane’s Defence Weekly စာစောင်က သတင်းမှာတော့ အဲဒီ Mi-17 ရဟတ်ယာဉ် ၅ စင်းကို တရုပ်နိုင်ငံကနေ "ဝ"ဒေသကိုတိုက်ရိုက်ပေးပို့တာမဟုတ်ပဲ လာအိုနိုင်ငံကနေတဆင့် မဲခေါင်မြစ်ကို ဖြတ်ကျော်ပျံသန်းပြီး"ဝ"တပ်ဖွဲ့တွေထံ ရောက်ရှိသွားကြတာ ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တစ်ခုထံက ကြားသိရတယ်လို့ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
မြန်မာအစိုးရ သတင်းရပ်ကွက်ကတော့" ဝ"တပ်ဖွဲ့တွေထံကို အခုအချိန်ထိ အဲဒီ ရဟတ်ယာဉ် ၂ စင်းပဲ ရောက်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
"ဝ"တပ်ဖွဲ့တွေကို အခု တရုတ်နိုင်ငံကပေးပို့လိုက်တဲ့ Mi-17 ရဟတ်ယဉ်တွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ TY-90 အမျိုးအစား ဒုံးကျည်တွေဟာ မြန်မာအစိုးရ လက်ဝယ်ရှိ ရုရှားနိုင်ငံလုပ် Mi-24 အမျိုးအစားတိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်တွေကို ပစ်ချနိုင်စွမ်းရှိုတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ Mi-24 တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယဉ်တွေကို မကြာသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကချင်ပြည်နယ် စစ်ပွဲမှာ မြန်မာလေတပ် ကသုံးစွဲခဲ့ပါတယ်။
Jane’s ထောက်လှမ်းရေးစာစောင်ရဲ့ ဖော်ထုတ်ရေးသားချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်အခြေစိုက် စစ်ရေးလေ့လာသူ ဦးအောင်ကျော်ဇောကို RFA အဖွဲ့သား ကိုနေရိန်ကျော် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာ နားဆင်နိုင်ပါတယ်။
တရုတ်-မြန်မာ အမြန်ရထားလမ်း ဒေသခံတွေစိုးရိမ်
ကျောက်မီးသွေးသုံး ဘိလပ်မြေစက်ရုံကို ဒေသခံတွေ လက်မခံကြောင်းပြော
ဝမ်ပေါင်နဲ့ လက်ပံတောင်း ဒေသခံအမှု ငွေဒဏ်နဲ့ အဆုံးသတ်
ဝါးစိမ်းတောင်အရေး ဒေသခံတွေ စိတ်မအေးနိုင်သေး
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းတာ ရှစ်နှစ်ပြည့်ပြီ၊ ပြန်စမှာကို စိုးရိမ်နေ
ဝါးစိမ်းတောင် စီမံကိန်းရပ်ဆိုင်းခြင်းနဲ့ တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု
ဝါးစိမ်းတောင်စီမံကိန်းကို စစ်ကိုင်းတိုင်းအစိုးရ မီးနီပြ
ရိုဟင်ဂျာအရေး သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ အချက်သုံးချက်သဘောတူ
China Today မဂ္ဂဇင်းကိစ္စ နေပြည်တော်ကို မန်းအစိုးရတင်ပြ
“၀” ဆိုတာက တရုတ်တွေပဲလေ။ သူတို့မှာ မြန်မာအမည်တွေ ရှိကောင်း ရှိနေပေမယ့် ၊ သူတို့မှာ တရုတ်အမည်တွေ ကိုယ်စီနဲ့ပဲ။ တရုတ်က “တရုတ်”ကို ကူတာ မဆန်းပါဘူး။ “၀”တွေ “ကိုးကန့်”တွေက မြန်မာနယ်စပ်မှာ ဘိန်းစိုက်စီးပွားရှာနေတာပဲဟာ။
May 29, 2013 02:04 PM
Before, China support the dictators without looking at the people's faces. Now, they support "O" without looking at the dictator's faces. They are opportunist.
May 02, 2013 09:51 AM
If the article in Jane's defence weekly is true,it is the gross interfering the Burma's internal affairs and must be condemn strongly.
May 01, 2013 09:36 PM
May 01, 2013 04:24 AM